Farmaajo oo u baxsaday dhanka Shuuciyadda Shiinaha | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo u baxsaday dhanka Shuuciyadda Shiinaha
Farmaajo oo ka cararaya isla xisaabtanka waddamada kor joogteeya Soomaaliya ee Reer Galbeedka ayaa u baxsady dhanka Shuucidda Shiinaha, wuxuuna Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya kula biiray go’aanka shuuciyad qaadashada geeska Africa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Shiinaha ayaa ugu baaqday waddamada kale ee caalamka in ay xushmeeyaan madax bannaanida Soomaaliya, waxayna soo dhaweysay waraaq ka soo baxaday Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya.
Warka ka soo baxay Shiinaha ayaa ku soo aaday, xilli wakiillada kale ee Beesha Caalamka ay cadaadis ku saarayaan Farmaajo oo waqtigii ka dhamaaday inuu tanaasul ka sameeyo arrimaha doorashooyinka.
In kastoo Farmaajo ka yimid Mareykanka, haddana si uu uga cararo cadaadiska reer Galbeedka ayuu 2018-kii ku biiray hindisaha Belt and Road Initiative, ee Shiinaha, halkaas uu u arkayay inuu kaga xoroobi doono canaanta Yurub iyo Mareykanka.
U janjeersiga Farmaajo ee Shuucidda Shiinaha iyo ka cararkiisa la xariira la xisaabtanka reer galbeedka, waxaa bannaanka soo dhigay xayeysiinta ay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed u sameyneyso, warka aan miisanka lahayn ee ka soo baxay Safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya.
Farmaajo, oo culeys xooggan uu ka saran yahay dibadda iyo gudaha ayaa hore taagero uga helay waddamada Qatar, Eritrea iyo Ethiopia, kuwaas oo si dadban iyo toos ahba u naas nuujinayay afartii sano ee la soo dhaafay.
Wakiillada Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, Mareykanka, Ingiriiska, Norway iyo kuwo kale, ayaa dhawaanahaan si adag ula hadlayay Farmaajo iyo hoggaamiyayaasha kale ee Soomaaliya, si waddanka looga qabto doorasho xor ah oo la isla ogol-yahay.